Nezvedu - Hbhenglun Co., Ltd.
Electric Mafuta Bhasikoro
Guta reMagetsi Bike
Electric Kupeta Bike
hbhenglun.com ndiyo UNKGOBIKE Yepamutemo Webhusaiti, ichipa vatengi neakanakisa emagetsi mabhasikoro, emagetsi makomo mabhasikoro, mafuta matai emagetsi mabhasikoro, kupeta emagetsi emabhasikoro, emagetsi maguta emabhasikoro, nezvimwe. , uye isu tinopa VIP DIY sevhisi. Mhando dzedu dzakanakisa dzekutengesa dziri mudura uye dzinogona kutumirwa nekukurumidza.
Hebei HengLun Trading Co, Ltd. nyanzvi yemagetsi bhasikoro cpmpany, ichipa vatengi neyakanakisa yemagetsi gomo bhasikoro, kupeta emagetsi bhasikoro, ebike kits uye ebike mabhatiri. Tine hunyanzvi hwehunyanzvi uye hwekugadzira dhizaini vanhu, vane yepamusoro yekugadzira tambo, chaiyo yekugadzirisa musangano, musangano wemusangano uye yekuvandudza ebike yekuyedza michina, inopa yakavimbika mhando vimbiso uye inofungidzira sevhisi kune vatengi.
OEM neODM mirairo inotsigirwa mukambani yeHengLun. Vatengi mibvunzo ichapindurwa mukati memaawa makumi maviri nemana, HengLun Tsvaga kuti upe maparters Hwakavimbika mhando, yemakwikwi mutengo, nekukurumidza mhinduro. Isu takatsaurira kudzora kwakasimba kwemhando yepamusoro uye nekufungisisa sevhisi, vedu vashandi vane ruzivo vanogara varipo kuti vakurukure zvaunoda uye nekuona vatengi vakazara, kugutsikana. Mumakore achangopfuura, kambani yedu yakaunza nhevedzano yezvigadzirwa zvemberi zvinosanganisira otomatiki yekugadzira tambo, CNC kuchera, Bhatiri yekuyera kugona kuyedza Midziyo.
Uye zvakare, isu takawana CE, zvitupa zveU. Uyezve, musika wedu wakakamurwa kuenda kune vekumba uye mhiri kwemakungwa, tichitengesa zvinopfuura zviuru gumi zvemabhasikoro emagetsi kuEurope, Maodzanyemba & North America uye Southeast Asia gore rega.we fekitori iri muguta rakanaka remumahombekombe, TianJin. isu tiri padyo neTianJin port.
Kutenda kwekambani kunorarama nehupamhi hwepamusoro uye kukudziridza nekuvimbika, tekinoroji yepamusoro inovandudza hupenyu hwevanhu uye basa rakanaka kumutengi.
HengLun china yakanakisa yemagetsi bhasikoro kambani kubva 2006 yanga iri kwemakore mazhinji kutora chikamu muCanton Fair, kuvandudzwa kwemamodeli matsva muchiratidziro chekare, isu tine yakasimba R & D uye timu yekutengesa, zvigadzirwa zvinotumirwa pasi.we tinogamuchirwa shamwari kuchiratidziro, uye ngatigadzirei girini, nharaunda inoshamwaridzika, yakasimba-inoshanda uye inochengetedza simba nyowani nyowani pamwechete.
Runhare: +86 13739731501
hbhenglun.com ndiyo UNKGOBIKE Yepamutemo Webhusaiti, ichipa vatengi nezvakanakisa emagetsi mabhasikoro, emagetsi makomo mabhasikoro, mafuta matai emagetsi mabhasikoro, kupeta emagetsi emabhasikoro, emagetsi maguta emabhasikoro, nezvimwe.
Kwete. 499 HePing Road, Xinhua Dunhu, ShiJiaZhuang Guta, HeBei Province, China